Enema nandritra ny fitondrana vohoka
Rehefa mitranga ny fanontaniana, azo atao ve ny manao bevohoka an-jambany, dia tokony hodinihina ireto manaraka ireto:
fampahafantarana ny vehivavy bevohoka;
Ny endriky ny isam-batan'olona amin'ny fitondrana vohoka sy ny toetry ny vatan'ny vehivavy;
anamnesis ny bevohoka taloha;
ny toe-tsain'ny dokotera amin'ny enemas.
Enema mandritra ny fitondran'ny vehivavy bevohoka dia fomba goavana hamahana ny olana amin'ny famonoana. Noho izany dia manadio ny tsinay lehibe ianao, nefa aza manafoana ny olana amin'ny fisehoany. Avereno izany fa tsy mihoatra ny indray mandeha isan-kerinandro ny dingana.
Afaka atao ny vehivavy Clyster mandritra ny fitondrana vohoka
Ity dingana ity dia natao hanadiovana ny tsinainy na ho an'ny tanjona ara-pahasalamana, rehefa misy fampidirana zava-mahadomelina amin'ny rctum. Ankehitriny dia tsy azo ampiharina ny fitsaboana fanafody, satria efa ampy ny fanafody amin'ny endrika labozia.
Ny olana amin'ny famenoana ny vehivavy bevohoka dia tena mahazatra. Izany dia vokatry ny fitomboan'ny ra manafoana ny fiasan'ny atidoha sy ny uterus amin'ny hormone - progesterone. Ny fiainana sy ny fihinanana sakafo tsy mifandanja dia matetika lasa mpialoha lalana ny fikorontanana.
Alohan'ny handehananao fanindroany mandritra ny fitondrana vohoka dia mila manatona dokotera ianao. Angamba ianao hanolo-kevitra fomba hafa hanadiovana ny tsinay, ohatra, entina manala baraka. Ny fikojakojana ny fihenan-koditra, amin'ny voalohany, dia manome vatana ampy tsara sy sakafo mahasalama. Mila mihinana voankazo sy legioma miaraka amin'ny fitsaboana kely loatra ianao, mametra ny fihinanana hena, tsaramaso, tsaramaso sy tsaramaso. Afaka misotro rano mafana isan'andro ianao eo amin'ny vavony iray tsy misy pentina, io fomba io dia misy fiantraikany tsara amin'ny fampiharana ny tsinay.
Na mety hitranga izany mandritra ny fitondrana vohoka ary ny mety hitera-pahavoazana rehefa miankina amin'ny vanim-potoan'ny fitondrana. Ny dendrina dia matetika ampiasaina amin'ny dingana voalohan'ny fitondrana vohoka. Izany dia vokatry ny fisondrotana avo lenta amin'ny progesterone ao amin'ny ra. Amin'ny faramparan'ny teny, aza manoro hevitra. Izany dia mety hiteraka fifandonana amin'ny tranon-jaza ary miteraka aloha vao teraka. Indrindra amin'ny teny manaraka taorian'ny herinandro fahenina. Ao anatin'ireo tranga tsy fahita firy, io fomba fanao io dia miteraka ny fitondran-tenan'ny zaza ao am-bohoka. Izany toe-javatra izany dia hazavaina amin'ny hoe ny ankizivavy sy ny peristalsis ao amin'ny tsinay dia fehezin'ny sakana iray.
Ny fifehezana ny tsy fahampian-tsakafo dia ny tsy fahazoana ny fiterahana teo aloha (fampijaliana), na ny tonon'ilay uterus amin'izao fotoana izao. Amin'ny toe-javatra toy izany, amin'ny fampitandremana dia tokony hampiasaina ny saka rehetra.
Enema mandritra ny fitondrana vohoka alohan'ny fiterahana
Hatramin'ny vao haingana, ny fialana mialoha ny fiterahana dia fanodikana tsy maintsy atao amin'ny trano fonenana ao an-tokatrano. Saingy androany dia afaka mitsena anao ny mpiasan'ny fitsaboana ary mamela anao hanao izany fomba izany any an-trano na handà izany mihitsy aza. Indrisy anefa fa ny ankamaroan'ny fikambanana ara-barotra.
Tokony hatao amin'ny fikarakarana henjana ny fitsaboana amin'ny vohoka, ka tsy manimba ny tranon'ny atidoha. Ho an'ny dingana, mila mampiasa pear hatramin'ny litera antsasaka ianao. Ny vehivavy bevohoka dia tsy afaka mameno ny tsinay amin'ny habetsahan'ny rano. Mba hanatsarana ny vokatr'izany, dia alefa amin'ny rano ny menaka vaseline (sotro roa). Mba hanamorana ny rano natsipy dia ho telopolo ka hatramin'ny valo amby telopolo degre Celsius. Ny tendron'ilay pearia dia voatsindry amin'ny famonoan-jazakely ary manosotra moramora ao amin'ny anus.
Ankehitriny, misy fanafody ampy amin'ny endriky ny labozia. Ny fampiasana azy ireo dia mandany fotoana be loatra ary tsy miteraka fahatsapana ho toy ny lozam-pifamoivoizana.
Ny fanapahan-kevitra hanamboatra saka na tsia dia mitaky isaky ny tsirairay. Saingy ilaina ny mitadidy fa mora kokoa ny fisorohana ny olana amin'ny famonoana noho ny fitsaboana.
Appendicitis mandritra ny fitondrana vohoka
Wobenzym nandritra ny fitondrana vohoka
Fanolorana aorian'ny fiterahana
MRI amin'ny fitondrana vohoka
Afaka bevohoka ve ny Kiwi?
Fanalana zaza tsy tapaka - haingana be ny mamantatra sy ny zavatra tokony hatao mba hisorohana ny fahasarotana?
Inona no dipoavatra amin'ny ranon-dity siramamy ho an'ny bevohoka?
Fanolorana aorian'ny ovulation, raha misy ny fiheverana
Herinandro 12 isaky ny fitondrana vohoka - inona no mitranga?
Vera Wong - akanjo fampakaram-bady 2015
Ny taom-baovao dia ny sakafo sakafo eo amin'ny latabatry ny taona vaovao
Sakafo ho an'ny zaza 2 taona
Clamin misy mastopathy
Ny zaza madinika - fitsaboana
Inona no mahasoa amin'ny milete?
Ahoana ny fomba hampivoarana hevitra?
Famaranana ny fasadin'ny trano misy gilasy
27 ny toerana mahagaga indrindra eto an-tany
Ny maso mitroka ho an'ny glaukom - lisitra
Fanafoanana ny fanafody
Inona no hanomezana zaza ho an'ny poizina?
Salsola miaraka amin'ny vary